2017 #NABShow - နေ့ ၁ ထုပ်ပိုးခြင်း။ | NAB သတင်းများ |4NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » 2017 #NABShow - နေ့4အသုတ်စုံ
ယနေ့ 2017 ၏စတုတ္ထ (နှင့်နောက်ဆုံး) နေ့ NAB ပြရန် - နှင့် wow! ကဘယျအရာတစျနေ့ဖွစျသညျ !!! 🙂နောက်ထပ်ဘုနျးနေ့က! သင်သိသောသူတို့သည်ထိုသို့ဆိုရ ဟောလိဝုဒ် ", La La မြေ" ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်သင်ကမှာနေကျသောအခါ NAB ပြရန်လူအပေါင်းတို့ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် La La မြေတတ်နိုင်သမျှလုပ်သူကလူအတော်များများကဝိုင်း, ဒီနည်းကိုပင် MORESO ထက်ခံစားရ ဟောလိဝုဒ်! (! ထက်ဝက်သာတစ်ရက်) ၏ The Show ကို၏ဤနောက်ဆုံးကိုက်သို့ chomp ယူကြပါစို့နှင့်ဤမဟာ-ခွေးကလေးတက်ပြီးအောင်! 🙂
ရိုင်ယန်ဟာသူတို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ထုတ်ကုန်တွေအကြောင်း, Tara Bugir, Decentrix သမ္မတနှင့်အတူ chatting ။ Decentrix တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် သူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာနှင့်ကြော်ငြာလုပ်ငန်းကိုမော်ဒယ်များတွင်ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများကိုပူးတွဲတင်ပြထား၏အဓိကရည်မှန်းချက်နှင့်အတူမီဒီယာ, Entertainment က Advertising ကြော်ငြာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများအတွက်လုပ်ငန်း analytics ဖြေရှင်းချက်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်လိုင်စင်ပြုလုပ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာကုမ္ပဏီ။ သူတို့ရဲ့ပြည့်စုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမီဒီယာစီးပွားရေးထောက်လှမ်းရေး (MBI ™) ဖြေရှင်းချက်သည် BIAnalytix ™ထုတ်ကုန်ပလက်ဖောင်း, မီဒီယာ, Entertainment ကဆက်သွယ်ရေးနှင့် Advertising ကြော်ငြာကုမ္ပဏီတွေရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရန်အထူးကိုက်ညီနေသည်။ BIAnalytix မဆိုမီဒီယာလုပ်ငန်းများအတွက်စီးပွားရေးထောက်လှမ်းရေးတစ်ဦး "အစာရှောင်လမ်းကြောင်း" အကောင်အထည်ဖော်ရေးပေး module တွေသို့မဟုတ်အဆောက်အဦလုပ်ကွက်၏ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြည့်စုံတစ်စုံပါဝင်ပါသည်။ ပလက်ဖောင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အားလုံးမီဒီယာအရောင်းအဝယ်စနစ်များကိုဖြတ်ပြီးအဆိုပြုချက်, အရောင်း, စာရင်း, စျေးနှုန်း, ပရိသတ်ကိုအသက်အပိုင်းအခြား, ဖောက်သည်များနှင့်ဘဏ္ဍာရေးသမိုင်း၏အရောင်းအပေါ်အချက်အလက်များ၏ကျယ်ပြန့်သောငွေပမာဏကိုဖြတ်ပြီးထိုးထွင်းသိမြင်ဖို့လျင်မြန်စွာလက်လှမ်းပေးသည်။
Edel Garcia က, GLOOKAST ၏အလုပ်အမှုဆောင်ဒုတိယသမ္မတ Sales & Marketing (ထို LiveU ကျောပိုးအိတ်နှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွား) ။ GLOOKAST Multi-format နဲ့, Multi-resolution နဲ့ MXF-based Workflows အတွက်မီဒီယာနှင့်ဒေတာများရွှေ့ကြောင်း tools များဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန် baseband နှင့်ဖိုင်-based စားသုံးမိ, မီဒီယာလှုပ်ရှားမှုနှင့် outgest များအတွက်ဖြေရှင်းချက်ပေးသညျ။ glooport မီဒီယာထုတ်လုပ်သူ: GLOOKAST သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံး-အစဉ်အဆက်သည်မိုဃ်းတိမ်နှင့် Virtual Machine ကိုအဆင်သင့်ဖြေရှင်းချက်အပါအဝင်3အသစ်သောထုတ်ကုန်များပစ်လွှတ်မှတဆင့် "ဟုမိုဃ်းတိမ်ကိုမှ Workflows ဖြစ်ပေါ်နေသော" နဲ့ပတ်သက်နေပါသည်! အခြားထုတ်ကုန် Gloobox LiveOps နှင့် Gloobox Capture အိုင်ပီ / 4K ဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, GLOOKAST ယခုတစ်ဖြစ်ပါသည် လွန်စွာလိုလားသော မဟာမိတ် partner နှင့်သူတို့အောင်မြင်ပါပြီ လွန်စွာလိုလားသော သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန် workflow နှင့်ဖြေရှင်းချက်အပြည့်အဝအားဖြင့်စမ်းသပ်ပြီးနှင့်ထောက်ခံကြသည်ဟုအဓိပ်ပာယျပလက်ဖောင်းလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး, လွန်စွာလိုလားသော.
နောက်တဖန်အရေးယူအတွက် LiveU ကျောပိုးအိတ်ရိုင်ယန်အင်တာဗျူးများဒုတိယသမ္မတစျေးကွက် & မြောက်အဖြစ် အမေရိကန်အရောင်း ZeeVeeခရစ် Scurto ။ နှင့်ရှိပြီးသားသို့မဟုတ်အသစ် cable ကိုအခြေခံအဆောက်အဦများပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ - ဆို Display ကိုစက်ပစ္စည်းတွင် - အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယိုသေချာဗီဒီယိုဖြန့်ဖြူးပလက်ဖောင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲ ZeeVee အင်ဂျင်နီယာများနှင့်ဖြန့်ဖြူးဖို့ဆန်းသစ်ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုစိန်ခေါ်ကြောင်းထုတ်ကုန်များနှင့်သြဇာစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများထုတ်လုပ် HD သို့ ultra-HD ကို/ 4K ဗီဒီယိုက။ ရိုးရှင်းစွာအလျှင်မြန်စွာ။ ZeeVee , AV စနစ်နှင့် IP ၏ convergence ဦးဆောင်ဆန်းသစ်စျေးကွက်မှဆောင်ခဲ့ထိရောက်သောနှင့် IP ကိုဗီဒီယိုဖြန့်ဖြူးပလက်ဖောင်းတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသောကုန်ကျသည်။ အဆိုပါ Show မှာကိုသူတို့က၎င်း၏တတိယမျိုးဆက် ZyPer4K တစ်သုည-အောင်းနေချိန်, compressed လုပ်မထားတဲ့ switching နှင့်ဖြန့်ဖြူးဖြေရှင်းချက်ပြနေကြသည်။ ZyPer4K ယင်းကိုအသုံးပြုခြင်းကို virtual plug ကိုနှင့်ကစား configuration ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဖြန့်ဖြူးရိုးရှင်းစွာ ZeeVee စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းနီးပါးမည်သည့်အဆိုပါကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းချွတ် 10Gb Ethernet switch သည်။
Greg LaPorte, Sonnet Technologies ကမှာ VP, NABShow အဆိုပါ eGFX ခွဲထွက် Box ကိုပြသသည်။ Sonnet Technologies က Inc ကို Thunderbolt ™ 2-to-PCIe®ကဒ်တိုးချဲ့စနစ်များကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူရှိ၏ ထောက်ခံတဲ့မီဒီယာစာဖတ်သူများ; RAID သိုလှောင်မှုစနစ်များ, နှင့်အသံ, ဗီဒီယို, နှင့်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လိုလားသူအသုံးပြုသူများအတွက်သိုလှောင်မှု, ကွန်ယက်နှင့်အခြားအင်တာဖေ့စကတ်များ။ Sonnet ရဲ့ Thunderbolt တိုးချဲ့ထုတ်ကုန်လိုလားသူအသံ I / O နှင့် DSP ကတ်များလိုလားသူဗီဒီယိုရိုက်ခြင်းနှင့် transcoding ကတ်များ, ကွန်ယက်နှင့်သိုလှောင်မှု interface ကိုကတ်များနှင့် Thunderbolt နည်းပညာ-enabled ကွန်ပျူတာများနှင့်အတူအခြား high-performance ကို PCIe ကတ်များ၏အသုံးပြုမှုကို enable ။ အဆိုပါ eGFX bandwidth ကို-intensive ဂရပ်ဖစ် application များအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြီး Thunderbolt 3-to-PCI Express (R) (PCIe (R)) တိုးချဲ့ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ eGFX ခွဲထွက် Box ကိုအသုံးပြုသူများအပြီး Thunderbolt 3-တပ်ဆင်ထားပြီး, eGFX-သဟဇာတမှတ်စုစာအုပ်, All-In-One, သို့မဟုတ်အခြားအသေး-form ကိုတစ်ဦးက high-performance ကိုဂရပ်ဖစ် (GPU ကို) ကဒ်သို့မဟုတ်အခြား PCIe ကဒ်ချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းပေးခြင်းအားဖြင့်ဂရပ်ဖစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင် -factor ကွန်ပျူတာ။
ဘင် Davenp သို့မဟုတ် t မဟာဗျူဟာကုန်ပစ္စည်း manager- Arvato, ဆွေးနွေးပွဲဆိုင်။ Arvato တစ်ဦးဦးဆောင်သည့်နိုင်ငံတကာဖြစ်ပါသည် အသက်ရှင်တော်မူသည်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကိုရှူရှိုက်ကြောင်းမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု service provider က။ 70,000 ကျော်နိုင်ငံများတွင်ထက်ပို 40 န်ထမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်စျေးကွက်အပေါ်အောင်မြင်ဖို့ကူညီနေတာပါ။ သူတို့ဟာဘက်ပေါင်းစုံဝန်ဆောင်မှုချည်နှောင်တလျှောက်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ကျယ်ပြန့ဖုံးအုပ်စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်ဒီဇိုင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရန်။ ဤရွေ့ကားဖြေရှင်းချက်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများ, ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးဟာစီမံခန့်ခွဲမှု, ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အိုင်တီန်ဆောင်မှုများပါဝင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်က, ဆော့ဖ်ဝဲကို download လုပ်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်, သို့မဟုတ်သင့် smart ဖုန်းပြုပြင်ကြပြီအခါတိုင်းသူတို့တစ်တွေ service provider ကအဖြစ်နောက်ကွယ်မှတက်ကြွစွာခဲ့ကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ 40 နိုင်ငံများထက် ပို. နှင့်တိုင်းတိုက်ကြီးအပေါ်သူတို့ optimized ဖြစ်စဉ်များများကိုပေးစွမ်းအဆုံးဖောက်သည်ကိုထောကျပံ့များနှင့်ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုဆက်ကပ်။
At Tedial, ရိုင်ယန်ဂျေး Batista, အထွေထွေမန်နေဂျာ, အမေရိကန်စစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ Tedial မီဒီယာနှင့်အလုပျသစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထိရောက်မှုနှင့်အမြတ်အစွန်းဖို့ဒီဇိုင်းအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ပေါင်းစုံဆုရမီဒီယာအိုင်တီပလက်ဖောင်း, Tedial အီဗိုလူးရှင်း, မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာမောင်းနှင်ပေးခဲ့သည်နှင့်စီးပွားရေးအတွက်လာမယ့်မျိုးဆက်နှင့်အတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာကုမ္ပဏီပေးပါသည်။ ဒါဟာပြည့်စုံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်သို့မီဒီယာပြင်ဆင်မှုနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလက်ထပ်ထားတဲ့ end-to-အဆုံးစီးပွားရေးကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီအကုန်ကျ-ထိရောက်စွာသောသူတို့အားမီဒီယာစားသုံးမှုတစ်နှစ်အပေါ်တစ်နှစ်တိုးပွားလာသောမှာမကြုံစဖူးမြန်နှုန်းနှင့်အတူ In-line ကိုသူတို့ရဲ့မီဒီယာ throughput တိုးမြှင့်ဖို့ခွင့်ပြု၏အရွယ်မှာ tools များနှင့်အတူဖောက်သည်ပေးသည်။ Tedial အီဗိုလူးရှင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အားဖြည့်ခြင်းနှင့် linear, VOD နှင့် OTT န်ဆောင်မှုများအတွက် Workflows မောင်းထုတ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Dave Clack, CatDV မှာစီအီးအို, သူတို့ရဲ့ပေးခဲ့သည်ရှင်းပြသည်။ သူတို့ကတစ်ဦးတီထွင်ဆန်းသစ်သောအရာရင်ပြင်ထောင့်ကွက်စနစ်များဖြစ်ကြ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထူးပြုဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီ, မာလ်တီမီဒီယာ tools တွေ။ သူတို့ကဂရုတစိုက်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စကားကိုနားမထောင်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာ့အကြီးကျယ်ဆုံးအဖွဲ့အစည်းများအချို့ကိုထောကျပံ့ဖို့အချိန်ယူပါ။ သငျသညျထိုသူတို့အားသွားလျှင်, သူတို့ရှာတွေ့သငျနှငျ့အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် မှန်သော သင့်ရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း။ ၎င်းတို့၏အဓိကထုတ်ကုန် CatDV, ဦးဆောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အလှည့်ပတ်အခြေခံထားတယ်။ CatDV ဖိုင်အမျိုးအစားများဟာအလွန်ကျယ်ပြန့်ကိုင်တွယ်နိုင်မယ့်အရွယ်မှာ Cross-platform ကို, မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုဒေတာဘေ့စပေး, ထုတ်ကုန်တစ် suite ကိုပါဝင်ပါသည်တဲ့မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြစ်သည်။ CatDV သင်ဟာသင့်မီဒီယာချမှတ်ခြင်းဆန့်ကျင် metadata ကို log နိုင်ပါတယ်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုတစ်ကက်တလောက်မရရုံကဗီဒီယို (ဗီဒီယိုတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုတိုးမြှင်ထောက်ခံမှုပါဝင်သည်ပေမယ့်) ဒါပေမယ့်လည်းပါသေးပုံများ, အသံဖိုင်တွေ, PDF များ, etc သော့ချက်စကားလုံးများကိုသုံးပြီးရှာဖွေဖြစ်ပါတယ်ဖန်တီး, ရုံခေါင်းစဉ် clip မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအစအဆင့်မြင့်သစ်ထုတ်လုပ်ရေး tools များနှင့်အတူမီဒီယာဖိုင်များ, Non-linear တည်းဖြတ်ရေး application များနှင့်အတူ sequence ကိုတည်းဖြတ်နှင့်ပေါင်းစည်းမှု၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် transcoding ပေးပါသည်။
သူတို့ရဲ့ BoxCasterPro နှင့်အတူဂေါ်ဒွန် Daily သတင်းစာ, Boxcast သမ္မတ။ ရိုးရှင်းစွာအထား, BoxCast အဖွဲ့အစည်းများများအတွက်ပြည့်စုံ, လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုကိုတိုက်ရိုက်လွှင့်ဖြေရှင်းနည်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့င် - BoxCast အရိုးရှင်းဆုံးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ပါသည် HDရရှိနိုင်ပါဖြေရှင်းချက် -streaming ။ သငျသညျတိုက်ရိုက်စီးဆင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးပါဝါ, အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုကင်မရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာယုံကြည်စိတ်ချရသောင် - BoxCast နှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏အဖြစ်အပျက်၏နေ့၌ခြေရာခံစောင့်ရှောက်ရန်တဦးတည်းလျော့နည်းအရာအဓိပ္ပာယ်ရှေ့ဆက်အချိန်သင့်ရဲ့ထုတ်လွှင့်အချိန်စာရင်း။ စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာ - သင့်ကြည့်ရှုမည်သည့် device ကိုအပေါ်တစ်ဦးဿုံအရွယ်ရုပ်ပုံလွှာရပါလိမ့်မယ်။ Plus အား, သင့် Streams အကြောင်းအရာကနေအာရုံမရှိကြားခံနှင့်မျှမနှောင့်အယှက်ကြော်ငြာတွေရှိပါတယ်။ ဒါဟာတတ်နိုင်ရဲ့ - တဦးတည်းအနိမ့်သောစျေးနှုန်း, သင် overages စိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲအသတ်မရှိန့်အသတ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စတိုးဆိုင်အကြောင်းအရာန့်အသတ်ဖြစ်ရပ်များစီးဆင်းနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ BoxCasterPro အရှိဆုံးတောင်းဆိုမှုများ applications များ (4K • HEVC • 60fps • HDR • SDI • XLR) ကမ္ဘာ့အများဆုံးအဆင့်မြင့်သည်ဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းအားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံများအတွက်ဝှက်ရန်အသုံးပြုသည်။
ခရစ် Wagner, EVO, NeuLion သူတို့၏တဲန်းကျင်ရိုင်ယန်ဖေါ်ပြခြင်း! Neulion တစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါသည် ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုအသံလွှင့်, ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ငွေရစေခြင်းအတွက်အထူးပြု။ သူတို့ကစိတျကူးတိုင်းကိုအင်တာနက်-enabled device ကိုမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့် On-demand အကြောင်းအရာကယ်နှုတ်တော်မူ။ သူတို့ကအကြီးမားဆုံးအားကစားအတွက်အမည်များ, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်တက္ကသိုလ်များအဘို့နှစ်စဉ်အဆပေါက်သောဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာမဟာဗျူဟာများဖွံ့ဖြိုး။ သူတို့ရဲ့ဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏အစွန်းပေါ်မှာအဆက်မပြတ်ဖြစ်ကြပြီးမှတက်အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးအကြောင်းအရာမကယ်မလွှတ် က Ultra HD/ ဆိုချိတ်ဆက်စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ 4K ။ သူတို့ဟာ pay-per-အမြင်, စာရင်းပေးသွင်းမှုနှင့် Affiliate စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းအပါအဝင်သူတို့တိုင်းဖောက်သည်များနှင့် drive ကိုဝင်ငွေအောင်မြင်မှု၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းကြောင်းကောင်းစွာ-built ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့ကြမျိုးစုံငွေရှာခြင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာအတူမျိုးစုံစားသုံးသူကိရိယာများပေါ်တွင်လျင်မြန်စွာအသစ်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်မဟာဗျူဟာအစပျိုးဖို့ကူညီပေးပါ။
ကောင်းပြီ, ထိုကြောင့်ပဲ! ဗိုလ်လုပွဲထုပ်ပိုးပြီး! ရဲ့တက် tighten'er နှင့်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်သူမ၏ထားကြစို့ - WE ပြု! NAB ပြရန် 2017 တရားဝင်ကျော်ဖြစ်ပြီး, ယခု left ရဲ့သမျှသောမျက်ရည်ဖြစ်ပါတယ် (-clean up လုပ်ဖို့ရှိခြင်းထံမှ!) ကျွန်မအံ့ဘွယ်သောလူကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် NAB ပြရန် အတှေ့အကွုံ - NAB မှာဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်အသံလွှင့်မှတခြားလူတိုင်းအတွက်ရန်, ဝန်ထမ်း Beat - သင်အပါအဝင် (သင်သင်မည်သူသိပါ! - သင်သည်ယခုထိုအခွင့်ကိုဖတ်နေသူတင့်) ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ဖို့လူ၏ထိုကဲ့သို့သောရှည်လျားသောစာရင်းကြောင်း တစ်ခုလုံးကိုဘလော့ဂ်ကဒီသင်ပြုရပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... အမည်များစာရင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်အောင်မညျ!
(ထိုအသံလွှင့် Beat က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုလိုက်နာဖို့သတိရပါwww.broadcastbeat.com), နှင့်ကိုကြည့်-In ပေါ်မှာမကြာခဏ ... တစ်နည်းအတွက် blogged-နေ! ဂရုစိုက်ပါ! - ရိုင်ယန်
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား sprockit က Ultra HD ဖိုရမ် 2017-04-27
ယခင်: Aaton ဒစ်ဂျစ်တယ်ရဲ့ CantarMini 16 လမ်းကြောင်းရောနှော-အသံဖမ်း Pro ကိုအသံသတင်းများအားဖြင့်တင်ပြ, NewBay ရဲ့အကောင်းဆုံး Show ကိုဆုချီးမြှင့်၏ဆွတ်ခူး
နောက်တစ်ခု: Entries သည် motion + ခေါင်းစဉ်ဒီဇိုင်းသူဟာ Emmy ခေါ်ရန်မေလ 1st တွင်ပိတ်